Munamato wekubvisa ziso rakaipa? San Luis Beltrán neSan Benito
Munamato wekubvisa ziso rakaipa Izvo zvinobudirira kubvisa ichi chakaipa icho chiri chepamweya pro chinoratidzwa mumuviri wewakakanganiswa.
Pese nyikaMutsika dzakasiyana-siyana dziripo, iko kutenda kunochengetwa kuti kutaridzika kweshanje, kufunga kwakaipa kana chishuwo chinozvarwa negodo chinogona kuve chikonzero chehurwere hwepanyama senge zvirwere, kukuvara uye nezvirwere zvinogona kukonzera. rufu.
Iyo inozivikanwa seziso rakaipa sezvo ichifungidzirwa kuti inonyanya kutakurwa kuburikidza neyekutarisa kwakaipa kwakadzurwa neyakaipa vibes uye zvakaipa zvakaipa.
Nyaya yemweya chaiyo inogona kuva nemhedzisiro inouraya kana matanho akakodzera akasatorwa, vanhu vazhinji vanogona kuona chiremba uye vanogona kuona mamwe maitiro asi zvakaipa zvichiripo zvichikonzera kukuvara.
Chinhu chakaipa chinoshatisa icho chiri kusungira munhu, kazhinji chinoratidzira muganda kana nekuora mwoyo, chinhu chakakosha ndechekuzviona nekufamba kwenguva nekuzvidzivirira nezvombo zvemweya.
1 Munamato wekubvisa ziso rakaipa
1.1 Munamato wekuporesa ziso rakaipa
1.2 Munamato weSt. Louis Beltran kuti ubvise ziso rakaipa
1.3 Namata kuna Saint Benedict kuti ubvise zvakaipa
1.4 Munamato weziso rakaipa muvana
Icho chinangwa cheiri chirevo bvisa zvakaipa zvachose uye zvakaipa zveseNdozvazvinga zvakakonzeresa mumuviri wemunhu anozvitambudza.
Zvinokurudzirwa kuti unamate nemunhu akakanganisika kuti kazhinji vana vadiki kwazvo asi vakuru havabude munjodzi.
Zvichienderana nekuoma kwenyaya imwe neimwe zvinokurudzirwa kuita mitsara yakati wandei, izvi kuitira kuti utore mudzi hwakaipa kusiya mamwe maitiro mumunhu asi anogona kupora zvizere kubva kuzvinhu zvese.
Iyo nyaya inofanirwa kutaurwa zvakajeka nezve kana chiri chinhu icho vanhu vazhinji vasati vatenda kuvapo.
Kune zviitiko chaizvo zvevanhu avo vakaponeswa kubva kurufu rwava pedyo inokonzerwa neiyi yakaipa mushure mekuita munamato.
Munamato wekuporesa ziso rakaipa
Ndinokuyambuka muzita raBaba… (Taura muzita remunhu) reMwanakomana… (Taura muzita zvakare) uye neMweya Mutsvene… (Taura muzita zvakare) Ameni.
Jesu! Zvisikwa zvaMwari
Ini ndacheka kutya kwako, handizvicheke nebanga, kana nesimbi, kana nenyundo, nekuti haigoni kutemwa.
Ndakaicheka muzita raBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene.
Wakafarira munamato wekuporesa uye kubvisa ziso rakaipa?
Kune minamato yakawanda inogona kuitwa kurapa ziso rakaipa, zvisinei variko avo vanoti vamwe vanoshanda kupfuura vamwe asi izvo Zvinoenderana nenyaya yega yega.
Ngatiyeukei kuti ichi chimwe chinhu chakajeka mune zvomweya, ndeyechikonzero ichi kuti usati waita munamato, zvinodikanwa kuti uve pachena nezvekuti chii chinoda kuitwa kuti uwane mhedzisiro yaunoda.
Se sosi yezvishamiso zvine simba, munamato unotipa, mune ino kesi, kupora kwakazara kuti muzvinoitika zvakawanda zvinogona kuve kunoonekwa nekukasira, kureva kuti haufanirwe kumirira kwenguva refu kuti utange kuona zvakakosha shanduko mumunhu. .
Munamato weSt. Louis Beltran kuti ubvise ziso rakaipa
Chisikwa chaMwari, ndinofunga uye ndinokuropafadzai muzita reUtsvene Utatu Baba, + Mwanakomana + neMweya Mutsvene + vanhu vatatu uye chinhu chechokwadi uye cheMhandara Maria Mukadzi Wedu Akaberekwa asina gwapa chivi chekutanga.
Mhandara usati waberekwa + mukubereka vana + uye mushure mekubereka mwana + uye naShe Gertrude anokudzwa mukadzi wako anodiwa uye ane zvipo, Mhandara zviuru gumi nerimwe, Lord San José, San Roque naSan Sebastian uye kune vese Vatendi uye Vatsvene veDare renyu reKudenga. .
Nekukudzwa kwako kukuru kwakakura kwazvo + Kuzvarwa kwakakomberedza + Kufadza kwakanakisa Chisikwa chechirwere ichi, ziso rakaipa, kurwadziwa, tsaona nefivhiri uye kumwe kukuvara, kukuvara kana chirwere.
Munamato woku San Luis Beltran Kune ziso rakaipa rine simba kwazvo!
Musande uyo anotibatsira kusunungura pachedu kutuko idzo vamwe vanhu vanodzorwa nesimba rezvakaipa vanogona kukanda patiri.
San Luis Beltrán inyanzvi pamusoro penyaya yekurapa, mune idzodzi dzinobva kumweya.
Vamwe vanhu vanokurudzira kuperekedza minamato yavo pamwe nezvimwe zvinomera zvekurapa izvo zvinobatsira nzira yekusunungurwa asi izvi hazvisungirwe sezvo munamato wega unoshamisa uye une simba.
Namata kuna Saint Benedict kuti ubvise zvakaipa
Oh Mutsvene Benedict! Mudiwa uye unogara uchirangarirwa, Iye pamberi pamauto aigara achiziva nzira yekubvisa, Iye anofarira vanhu vake, Uye aninipisisa akazvipira kuna Tenzi wedu.
Ndinokukumbira kuti nekumharadzanisa kwako kweVamwari, Kugadzirisa zvandinoda, Kurumidza sezvingabvira, Kuti ndidzivise simba rezvakaipa, Hupenyu hwangu uye hama dzangu, Simba rauinaro, Iva wakanaka nerudo, Iva uyo bvisa mweya wangu weutsinye nezvakaipa.
Nekufanirwa kwaIshe wedu Jesu Kristu, ndinokukumbira kuti undiperekedze panguva dzese dzehupenyu hwangu, ndinokukumbira kuti undidzivirire kubva pane zvakaipa zvese nenjodzi, Kubva kun'anga nehuipi, Kana vaine maoko havakwanise kundibata kana vasina tsoka Nditeererei, muvengi wese ngaakundwa uye azungunuke, neyako dziviriro uye neyaMwari.
Kubwinya kana kudedera, ndakatya ndikakwanisa kundirongera, Dai miromo yangu nerurimi rwangu, Zvangova nenyasha chiuru kwauri, Kurumbidzwa nemaropafadzo, Runyararo nerunyararo mumweya mangu, Izvo zvisina nhamo kana kushama, Kana nzara kana kusuwa, Vanozorora mukati mangu neupenyu hwangu, Uye kunyangwe vakapfuura, ini ndine simba rekudana zita renyu dzvene.
Ndinozviisa kwauri, Ndinovimba uye ndinovimba mamuri, Ameni.
Reza St. Benedict munamato wekubvisa zvakaipa nekutenda.
Saint Benedict anozivikanwa semuranda anogamuchirwa naye naMwari ndosaka achive mubatsiri wedu papi nepatinoda bvisa zvakaipa pahupenyu hwedu, kumba, basa, imba y mhuri.
Chechi yeKaturike pasirese inosimbisa kushandiswa kwe Musande Benedict menduru kutichengeta isu kure kana kudzivirira ml kunowanikwa kwese kwese.
Simba rakashata rinowanikwa munzvimbo dzese dziripo, ndosaka zvakakosha kuchengetedzwa, kugadzira munamato kuSt Benedict zuva nezuva kunotibatsira kuti tizvichengete takachena kubva pane izvi zvakashata masimba uye kubva pane zvakaipa zvese zvinogona kutiwira.
Munamato weziso rakaipa muvana
Muzita dzvene raMwari baba;
Muzita dzvene revakawa uye revadziviriri vekudenga vanogara kudenga, vachichengetedza kuda kwevakatendeka vanozvipira.
Ah baba vangu! Nhasi ndinochema pamberi pezita rako kuti ubatsire mudiki uyu.Mumaawa aya anopindwa negodo neuyo anongoda zvakaipa kumuvakidzani wake.
Wako utsvene uye nengoni ane moyo wakanaka anogona kuita zvese, ishe, uye ndoziva kuti uchaita hutano hwako kuti hudzore mamiriro ayo epfungwa, mufaro uye kubwinya kweyezvinoyere.
Batsirai, Mwari Wemasimbaose, nekuti ndimi moga munogona. Ameni.
Vana vanoita sekunge vari paruzhinji rusina tsarukano rwunotambura neziso rakaipa, izvi zvinoitika kazhinji nekuti vacheche vanomuka, mumoyo izere neuipi hwevamwe vanhu, avo vane godo zvido zvekuve nezvakune mumwe.
Mashoko anoratidzika seasingakuvadze ziso rakashama anogona kuuya akaremerwa nekukuvara kwakawanda zvekuti anopedzisira akanganisa kukanganisa kwemuviri kwevana.
Iyo inokurudzirwa zvakanyanya ita munamato mangwanani ega ega nezve vana kuti uvadzivirire uye uvachengete zvakadaro mukati mezuva, izvi zvinofanirwa kuve tsika yemhuri.
Madhiyamu nema amulets zvinogona kupfekwa asi hapana chakasimba kudarika munamato.
Chinhu chakakosha kuve nekutenda panguva yeminamato kuti ubvise ziso rakaipa. Hapana chimwezve.
Namata gara uchitenda kuti zvese zviri kufamba zvakanaka.